DEG-DEG: Liverpool Oo Ku Dhawaaqday Inuu Baxay Mid Kamida Xiddigaha Ugu Khibrada Badnaa Kooxdeedu & Halka Uu Ka Degay - Gool24.Net
DEG-DEG: Liverpool Oo Ku Dhawaaqday Inuu Baxay Mid Kamida Xiddigaha Ugu Khibrada Badnaa Kooxdeedu & Halka Uu Ka Degay
Kooxda Liverpool ayaa shaacisay inay kooxdeeda ka dirtay oo ay iibisay daafacii dhexe ee ree Croatia ee Dejan Lovern oo kamid ahaa xiddigaha ugu khibrada badan kooxdaas isla markaana lix xilli ciyaareed kusoo qaatay Anfield.
Dejan Lovern oo Liverpool kaga soo biiray dhinaca kooxda Premier League ee Southampton ayaa hadda heshiis dhan 11 Milyan oo Pound ugu wareegay dhinaca kooxda dalka Ruushka ee Zenit.
Dejan ayaa Liverpool tan iyo sanadkii 2014 usoo ciyaaray 185 kulan isaga oo usoo dhaliyay siddeed gool isla markaana kula soo guuleystay UEFA Champions League, Premier League, Club World Cup iyo UEFA Super Cup oo uu dhammaan 13-kii bilood ee u dambeeyay hantay.
Liverpool oo hadda warbixin rasmi ah kasoo saartay bixitaanka Lovern ayaa sheegtay inay wanaagsan oo dhan daafaca ree Croatia uga rajaynayso loolankiisa cusub.
Warbixinta Liverpool ayaa u dhignayd sidan “Waxaanu xaqiijin karnaa in Dejan Lovern uu heshiis rasmi ah ugu biiray Zenit”
“Qofkasta oo jooga Reds waxa uu jeclaan lahaa inuu Dejan uga mahad celiyo waxa cajiibka ah ee uu kooxda kusoo kordhinayay sanadahaas waxaana uu uga rajaynayaa dhammaan wanaag oo dhan loolankiisa cusub”
Lovern ayaa ahaa mid kamida xiddigaha dhaqan ahaan saamaynta badan ee uu Jurgen Klopp ku haystay qolka labiska kooxdiisa.
Goolka ugu muhiimsan ee lagu xasuusan doono Dejan ayaa noqon doona guushii soo laabashada ahayd ee 4-3 ahayd ee ay ka gaadheen Borussia Dortmund markaas oo uu goolka kulanka go’aamiyay daqiiqadii ugu dambaysay madax ku dhaliyay.